Orinasa fanaka, mpamatsy | China Lables mpanamboatra
Marika plastika / Sliver namboarina ho an'ny tavoahangy misy rano.
Plastika namboarina / marika mazava ho an'ny tavoahangy misy ranoka.
Product Information Model Plastic label Industrial Use E liquid material Synthetic PP Surface Handing Screen Printing Place of Origin China Brand Name ANKE Model Number ANKE-Label Size custom Sample Free sample Printing CMYK printing PRODUCT - Customized Plastic/Synthetic PP label for e liquid bottle. &nbsp...
Taratasy plastika / synthetic PP namboarina ho an'ny tavoahangy misy rano.
Ataovy miavaka plastika / Silver marika ho an'ny y rano tavoahangy
OEM Labels ho an'ny e ranoka
OEM Labels ho an'ny e liquid Labels dia vita amin'ny akora plastika. Ampy tsara izy io ary tsy ho rovitra. Ny vokany loko dia tsara ihany koa amin'ny fitaovana plastika. Manao CMYK pirinty loko feno izahay, ny vokarin'ny loko farany dia ho mazava sy hitovy amin'ny sangan'asanao. Satria vokatra OEM io, andao hojerentsika ny antsipiriany bebe kokoa momba ny OEM: 1: haben'ny OEM — Habeny mifototra amin'ireo tavoahangy. Ohatra: tavoahangy 10ml — marika 60 * 30 mm; Tavoahangy unicorn 60ml — Labels 80 * 90mm homenay ny ...